Akụkọ - Xuxiang mmepụta usoro
Xuxiang mmepụta usoro
1. Oke igwe ụmụaka gbasara nha igwe ụmụaka
Akara akara dabere na dayameta nke wheel. N'ikwu okwu n'ozuzu, inch 12, sentimita 16, na 20 sentimita na-ezo aka na dayameta nke wiil ahụ, na inch na-ezo aka na sentimita, na inch nke ọ bụla hà nhata 2.54 centimeters. 2.14 inch 18 inch abụghị ọkọlọtọ zuru ụwa ọnụ ọkọlọtọ zuru ụwa ọnụ maka igwe igwe bụ naanị 12-inch, 16-inch, na 20-inch ngwaahịa, ebe igwe 14-inch na 18-inch bụ n'ezie “ihe ọhụrụ” nke ndị na-emepụta ụlọ mere. dabere na mkpa ahịa. Nke a bụkwa ihe kpatara na ụfọdụ ụdị mba ụwa enweghị ụdị etiti dị ka 14, 18. N'ihi ịdị elu nke oche na ọnọdụ njikwa na-agbanwe agbanwe, na-emekarị ịnyịnya ígwè nwere ike izute ihe achọrọ nke ọtụtụ afọ dị iche iche. Ma n'ihi na ụmụaka strollers nke dị iche iche nha bụghị nanị nwere ọdịiche dị elu, kamakwa n'ogologo, handlebar obosara, torque, wdg, n'ihi ya, ọ kasị mma ịghara ịhọrọ oke nnukwu ihe nlereanya. Aro anyị bụ ịhọrọ ihe nlereanya nke etiti na ibu.
2. Xuxiang igwe igwe agba agba
Usoro agba 1, Nke mbụ, agba a na-eme achịcha kwesịrị itinye putty na ọnụ ụzọ panel dị ka oyi akwa nke agba agba. Tinye ugboro atọ nke primer na ugboro anọ nke uwe elu na mkpụrụ. Mgbe ọ bụla a na-etinye agba, a na-eziga ya n'ime ụlọ ebe a na-eme achịcha na-enweghị uzuzu na okpomọkụ maka ime achịcha.
Usoro agba 2, Mgbe emechara putty ahụ, chere maka putty ka ọ kpọọ nkụ, na-ehichapụ ma na-edozi elu nke ọnụ ụzọ agba. Tụlee ìhè ahụ ka ịhụ ma ọ bụrụ na ọ dị peel oroma n'elu ọnụ ụzọ a na-ese. Elu nke ọnụ ụzọ ọnụ ụzọ kwesịrị ịbụ nke enweghị ahịrị na peel oroma. Jiri aka gị metụ akụkụ na nkuku nke ọnụ ụzọ a na-ese ihe ka ịhụ ma ọ dị mma ma dị larịị; lelee ma agba nke akụkụ na nkuku dị ka agba nke ọnụ ụzọ ọnụ ụzọ.
Agba agba 3, wee fesaa primer 3-5 ugboro, na mgbe ọ bụla ịgbasa, na-ehichapụ agba na mmiri ájá na abrasive ákwà. Mgbe emechara, jiri aka gị metụ elu ọnụ ụzọ a na-ese ihe ka ịhụ ma enwere uzuzu na afụ ikuku. N'elu ọnụ ụzọ ọnụ ụzọ a na-ese kwesịrị ịdị larịị ma dị nro, nke na-enweghị ihe ọ bụla, na enweghị mmetụ na-adịghị mma na mmetụ ahụ.
Usoro agba 4, N'ikpeazụ, fesa 1-3 ugboro nke topcoat na-egbuke egbuke, wee jiri akwa okpomọkụ mee ihe iji gwọọ akwa akwa.
10G 14G na-anọchi anya ụdị nke spokes. A na-ekewa ụdị a nke ọma n'ime 8G, 9G, 10G, 13G, 14G, 15G, wdg dịka dayameta siri dị. Ndị na-ekwu okwu nke dayameta dị iche iche nwere uru dị iche iche. Ụgbọ ala ụmụaka na-ejikarị ụdị okwu ọnụ abụọ a dị n'elu.